Somalia online: Dad baa ku doodaya in Shiicadu ay Muslimiin yihiin! (Daawo Filimkan)
Dad baa ku doodaya in Shiicadu ay Muslimiin yihiin! (Daawo Filimkan)
Dad badan oo Muslimiin ah ayaa ku doodaya in Shiicadu ay yihiin Muslimiin Muwaxidiin ah Subxaannaallah!!! Shiicada waa Majuusiyiin aan wax raad aad ah ku laheyn diinteena Suuban ee Islaamka, waxayba Shiicadu kasii xagjiraan oo ay ka dhib badanyihiin Gaalada Kirishtaanka ah iyo kuwa la midka ah.
Akhristow haddii aad maqashay ama Shaashadaha ka daawatay Baadariyaal Kirishtaan ah oo gubaya Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah, maantana nala daawo Shiico Majuusiyiin ah oo iyana Kitaabka gubaya.
Sidoo kale Akhristow waxaaad isku daydaa inaad fahamto qoraalka yar ee Carabiga ee lagu tarjumayo hadalka Shiicada marka ay Qur’aanka gubayaan.
Waxaa Xaqiiqo ah in haddii aad si fiican u dhuuxdo hadallada ay ku hadaaqayaan marka ay Kitaabka gubayaan inaad ogaandoonto Xiqdiga iyo Xaasidnimad gaamurtay ee Shiicadaasi ay u hayaan Dadka Muslimiinta ah.Daawo Filimka